Somaliland oo mamnuucday Universal TV - BBC Somali - Warar
Somaliland oo mamnuucday Universal TV
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 3 Febraayo, 2014, 11:32 GMT 14:32 SGA
Masuuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in telifishanka af soomaaliga ku hadla ee Universal TV laga joojiyay inuu ka hawlgalo deegaanda Somaliland, iyagoo ku eedeeyay inuu dacaayad ka fidiyay Madaxweynaha Somaliland.
Universal TV waxa xaruntiisa weyn ay ku taal London
Masuuliyiinta Somaliland ayaa sheegay in telifishanka af soomaaliga ku hadla ee Universal TV laga joojiyay inuu ka hawlgalo deegaanda Somaliland .
Wasiirka warfaafinta Somaliland Cabdullahi Maxamed Daahir Cukuse ayaa sheegay in Universal TV uu ka fidiyay dacaayad rakhiis Madaxweynaha Somaliland barnaamij uu todobaadkan sii daayay.
Maxamed caabi digaale agaasimaha universal tv ee somaliland ayaa BBC u sheegay in xukuumada somaliland ka cadhootay barnaamij lagu magacaabo Faaliyaha Qaranka oo ah barnaamij majaajilo siyaasadeed oo inta badan lagu soo qaato siyaasiyiinta waaweyn ee Soomaaliyeed.
Wuxuu Caabi sheegay inuu u arko shaqada laga joojiyay Universal tv go'aan lagu degdegay , xorriyadda saxaafadana meel kaga dhacaya .
John Kerry oo booqanaya Afgaanistan 11 Luulyo 2014
Dadka macaanka qaba iyo soonka04:06
Tirakoobka dadweynaha Soomaaliya oo la sameeyay 04:01
Mataaneynta Muqdisho iyo Istabul oo laga faa'iidayo01:57
Madxafka Minnesota oo heesaha Soomaalida laga aqoonsaday04:24
Dawladda oo ka hadashay weerarkii Villa Soomaaliya02:24
Soomaali ku nool gobolka Alaska04:06
Maxamed Qalaf Shangole oo geeriyooday00:52
Warbixin ku saabsan ciyaaraha Video Games-ka04:13
Barakacayaasha Muqdisho oo qabow uu saameeyay02:32
Qiimaha Khaatka Muqdisho oo hoos u dhacay03:21
Muxuu yahay cudurka Ebola01:09
Wiil reer Falastiin ah oo la dilay00:54
Dacwada Oscar Pistorius oo dib u bilaabatay00:15
Video: Gabadha "diinta Islaamka" ka baxday ee Sudan lagu xiray00:15
QM: Tiradda qaxootiga oo korortay00:15
Manaus waa magaalo ceynkee ah03:30
48 ku dhimatay weerar Kenya00:40
Waraysiga Edna Adan04:05
Sawirro: Duqeymaha cirka Isra'iil ee Qaza(none)
Sawirro: Gabar haadda ku ugaarsato(none)
Sawirro: Guriyaha casriga ah ee Hargeisa(none)